Game Muvaki, chimwe chezvishandiso zveGoogle zvekugadzira 3D mitambo | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe wakamboda kugadzira mutamboasi hauzive kuti sei Google ine chishandiso che ti. Akazvarwa mumusangano wake wezvirongwa zvekuyedza, Chikamu 120, iyo nyowani prototype yemutambo 'Game Builder' inopa mukana wekugadzira yako wega mitambo mukati meyakareruka nharaunda zvakafanana neMinecraft.
Google yakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti iyo Chikamu 120 chikamu, icho chinobata iyo incubation yemushandi mapurojekiti akasarudzika, yatanga Game Builder.
Game Muvaki, kusiyana nemamwe maturusi ekugadzira maturusi, akagadzirirwa kuita mutambo wega.
Google inoti chikuva ndechevaya "vane zano remutambo wevhidhiyo" asi vasina ruzivo mukukodha kana hunyanzvi hwe3D.
About Game Muvaki
Game Muvaki inopa kudhonza uye kudonhedza pasi uye kadhi uye block based yemugadziri wemutambo.
Mabhuroko anoumba nharaunda yauchatamba, nepo kadhi-rakavakirwa kodhi snippets richadzora maitiro ezvinhu mumutambo.
Vashandisi vanogona kugadzira mapuratifomu efoni, mamaki, kuporesa mishonga, mota dzinofamba uye zvimwe.
Pamusoro pezvo, vashandisi vanogona kuwana uye kuendesa mifananidzo yevatambi uye nharaunda kubva kuGoogle yePuratifomu, iyo inogadzira raibhurari yakavhurika yemahara VR uye maAfa zvinhu.
Kunze kweizvi zvese, Game Builder inobvumira vashandisi kubatana panguva chaiyo nevamwe vashandisi.
Izvi zvingaite kunge vanhu vanoverengeka vari kuvaka nhanho pamwe chete, kana mushandisi mumwe ari kuita mutambo wekuyedza vamwe vachiita nhanho.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Google's Area 120 yakaburitsa Game Builder paSteam munaNovember 2018, asi haina kutaura zvakawanda kusvika ikozvino nekuburitswa kweshanduro 2.0.
Iyo system inoyeuchidza Minecraft, uko zviito zvako mu Game Muvaki zvinobatsira kuumba iko kusikwa kwemutambo wako wega.
Ehe saizvozvo, Kungoti nekuti iwe hauzive kukodha hazvireve kuti iwe unofanirwa kuvimba nekadhi-based system zvachose. Mutambo uyu zvakare une chinangwa chekubvumira vashandisi kuti vawedzere uye vafambire mberi kana vachida kuziva chaizvo kuti zvinhu zvinoshanda sei.
Kunyangwe mutambo uyu wanga uriko kubvira gore rapfuura, kunyangwe izvozvi, mushure mekunge zvaziviswa zviri pamutemo, ichiri kunyorwa semuenzaniso.
Hazvizivikanwe kuti riini kana kana Game Builder ichakunda iyo yakapedziswa zita rezvigadzirwa, asi kana ikagadzira zvimwe zvido, Google inosungirwa kuitendera kuti ikure.
"Ngatiti iwe une zano remutambo wevhidhiyo," akanyora Mutungamiriri weGame Builder Logan Olson mune blog blog ichizivisa kuburitswa kwesoftware.
"Anogona kunge ari munhu wekutanga kupfura ane hozhwa pane (inononoka) kumhanya kwemutemo, kana mutambo wevazhinji uine pugs chete.
Pane dambudziko rimwe chete: hauna kumbobvira waita mutambo. Iwe hauzive maitiro ekuronga. Iwe hauzive chero 3D muimbi. Uye maturusi ese aunowana haatenderi iwe kubatana neshamwari. Nekuverenga kwedu, izvo zvinomutsa nyaya ina, asi isu tinofungidzira Google inonzwisisa manhamba zvirinani kupfuura zvatinoita, saka isu tichaongorora kaviri-kuti Calculator haina njodzi.
“Muvaki weGame anovavarira kugadzira kuvaka mutambo sekutamba mutambo. Kana iwe wavaka nhare kana wakachera mugodhi mumutambo, iwe unotoziva maitiro ekuvaka iyo 3D nhanho mu Game Muvaki.
Pfungwa iri kumashure kweMuvaki weMutambo ndeyekuti iwe unogona kugadzira mutambo wezviroto zvako smune zvese izvo zvinhu zvakaoma sekudzidza kodhi kana maitiro ekurarama uye kudhirowa. Panzvimbo iyoyo, iwe unoshanda mune zvakatipoteredza neshamwari, sekunge yaive mutambo weMinecraft, mutambo uyo, kunyanya, wakagadzirwa nemunhu anogona kukodha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Game Muvaki, chimwe chezvishandiso zveGoogle zvekugadzira mitambo ye3D
Vocal, yakanaka kwazvo podcast yekushandisa yeLinux